11 ka timaha ugu fiican ee ragga | Niman qurux badan
11 ka timaha ugu fiican ee ragga
Qolka Ignatius | | Daryeelka shaqsiyeed, Timaha
Timaha gaaban wuxuu had iyo jeer ahaa mid aad u qurux badan oo lab ahSi kastaba ha noqotee, qaabka saxda ah ee adiga kugu habboon waxay ku xirnaan doontaa dhererka iyo nooca timahaaga. Inkasta oo timaha ugu fiican ee sanadkan aysan ahayn muuqaal cusub, kala duwanaanta aan dhammaadka lahayn ee qaabka ayaa mudan in la isku dayo.
Haddii aad ka fikireyso timahaaga cusboonaysii oo ma cadda waa maxay xulashooyinka ugu caansan 2022, maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan kaa saarno shakiga. Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa darsin ka mid ah noocyada kala duwan ee timaha.
1 timo textured
2 timo qallafsan
3 Qaabka timaha ee Pompadour
4 timo gaaban oo gadh dheer leh
5 maxkamada ciidamada
6 Mohawk iyo Faux Hawk Styles
7 Timaha midabka
8 timo cufan
9 Timaha xiiran
10 timaha qaloocan
11 Ivy League
Timo-jarida ayaa sii socota si ay u hesho caan sanad walba. Dib u soo nooleynta goyntan ayaa ka bilaabatay Yurub, waxay ku fiday Mareykanka, halkaasoo dhalinyaro badan ay u riyaaqeen timo gaaban oo fudud iyo xawaaraha habaynta.
timahan, isku dar timo gaagaaban oo sare oo leh libdhin dhinacyada, waxaana lagu habeeyey jel timo si loo dejiyo loona qaabeeyo.
Timaha caadiga ah iyo jarista ragga
quiff waa ikhtiyaarka ah timo casri ah oo moodada ah oo loogu talagalay nin kasta oo qurux badan. Timo-jaridani waxay bixisaa dherer dheeri ah oo xagga sare ah iyo dhinacyada xiiran ee gaaban mana aha timo fudud oo la jiido.
Muuqaalka ugu dambeeya ee timahan dhererka dhexdhexaadka ah ee casriga ah ayaa u qalma, inkastoo rag badan Subax kasta ma haystaan ​​wakhti ama rabitaan ay ku shanleeyaan timahooda.
Qaabka timaha loo doorto iyadoo loo eegayo da'daada
Si aad u habayso waxaad u baahan doontaa a qalajiyaha heerkulka sare iyo jel. Haddii aad rabto inaad gaadho muuqaal khariban, mari badeecada habaynta si siman, ka dibna dib u caday oo qalaji. Ugu dambeyntii, isticmaal farahaaga ama timaha u shanley sidaad jeceshahay.
Qaabka timaha ee Pompadour
pompadour, nooca quruxda badan ee quiff, isagoo aad ula mid ah dhinacyada gaaban iyo korka wax yar ka dheer oo lagu darayo gooyn gudaha ah si loo bixiyo muuqaal geesinimo leh iyada oo aan la jebin xariiqyada qaabka.
Si loo habeeyo pompadour, waxaad u baahan doontaa jel xoog leh, qalajiye iyo shanlo. Ku bilow inaad marso jel-ka, dabadeed timahaaga oo dhan dib u shanlee, ku dar wiish iyo mug. Marka aad hesho qaabka guud ee ugu dambeeya, afuufi si aad kulayl u mariso oo aad u ilaaliso qaabka aad habaysay.
timo gaaban oo gadh dheer leh
Gadhka iyo timaha timaha ayaa wada socda, dhab ahaantii, qaar ka mid ah timo-jaridda ragga ugu fiican Waxay u egyihiin xitaa si ka sii fiican iyagoo leh gadh buuxa. Isku-dubbaridka timo gaaban ama dheer oo korka ah oo leh gar iyo dhinacyo la xiiray, muuqaalkani wuxuu muujinayaa dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya timaha wejiga iyo timaha madaxa iyada oo aan u muuqan mid qallafsan.
Timaha xijaabka ee ragga
Waxaa loo yaqaanaa muuqaalkeeda milatari, tani waa timo timo stylish iyo adkaysi u leh ninka casriga ah. In kasta oo timo-jaraha caadiga ah laga yaabo inaysan u riyaaqin dhammaan qaababka wejiga, waxaad kala hadli kartaa timo-yaqaankaaga inaad ku darto kala duwanaansho yar oo la gooyey si ay ugu habboonaato qaabka wajigaaga.
Haddii aad leedahay weji wareegsan, isku day timo wax yar ka dheer xagga sare. Dhafoor weyn, ku dar cidhif ama dhinac xaaq baankaaga. Wax kasta oo aad doorbidayso, timo-jariddan bannaanka Way fududahay in la helo waana fududahay in la feedho.
Mohawk iyo Faux Hawk Styles
Mohawk iyo faux hawk (sidoo kale loo yaqaan fohawk) waa timo caasi ah oo Xusuusnow rockers punk. Nooca la cusboonaysiiyay ee qaabkan ayaa lagu dejiyay inuu noqdo mid caan ah sidii dayactir hooseeya, oo haddana muuqaal ah.
Mohawk-ka casriga ah iyo hawk-faux-ga ayaa ka dhigan tartiib tartiib ah inta u dhaxaysa timaha dhaadheer ee sare iyo dhinacyada la xiiray, laakiin weli waxaa ku jira xariijimaha gaarka ah ee timaha dheer ee hoos u dhacaya bartamaha madaxa.
Timaha casriga ah ee ragga
waa la gashan karaa meel kasta iyo maalin kasta. Mohawk-ka libdhay ayaa u muuqda mid aad u qabow oo soo jiidasho leh ragga midabka leh. Goyntani waxay qaadi kartaa noocyo kala duwan oo baaluq ah oo leh dherer kala duwan oo korka ah.
Haddii aad runtii raadinayso a isbedel xagjir ah, rinjiyeynta timahaagu waxay noqon kartaa habka ugu fiican ee loo sameeyo. Inkasta oo rag badani aanay timaha midabaysan u tixgelinayn ikhtiyaar, waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan ee dib loo bilaabo inta aan heleyno timo timo ah oo inta badan na aqoonsanaya.
Timaha blond platinum, caddaan iyo cawl Waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo leh timo sax ah oo muuqaal ah. Iyadoo aan loo eegin waxa midabkaaga dabiiciga ah ama midabkaaga dabiiciga ah, doorashada timaha timaha ugu fiican waxay abuuri doontaa muuqaal gebi ahaanba ka duwan oo buuxinaya timahaaga.
Haddii aad rabto a muuqaal caadi ah oo haddana casri ah, timaha mohawk weli waa doorasho weyn. Timahani waa mid aad u badan, sidoo kale waa sahlan tahay in la gaaro oo si sahlan loo qaabeeyo.
Laga soo bilaabo gooyn hoose, iyada oo la sii gooyo dhinacyada, gooyn gaaban ama dhexdhexaad ah oo dusha sare leh, qaabkan qaybinta waxay bixisaa dhammaan noocyada fursadaha.
Haddii aad raadinayso timaha ugu dambeeyay ee ragga taas oo ah sasabasho ku dhawaad ​​nooc kasta oo waji ah iyo nooca timaha, timo-jaridda dhinaceeda waa inay noqotaa mid ka mid ah xulashooyinkaaga ugu sarreeya sanadkan.
Ku sharad timo cusub marka timahaagu ay lulanayaan, maahan wax fudud, maadaama timo-jaraha guud ahaan ay la kulmaan qufullo aan si fudud loo maamulin. Horaa loo yidhi “Haddaad cadawgaaga ka adkaan waydo isaga ku biir”.
Marka aad aqbasho, waxaad arki doontaa sida timo-jilicsan ay yihiin kuwa muujinaya dabeecad dabiici ah oo dheeraad ah, tan iyo ku dar taabasho aan lagu gaari karin noocyada kale ee timaha.
Laakiin si aad noloshaada ugu fududaato, waxaanu kugula talinaynaa inaad gooyso timo aad u gaaban dhinacyada. Tusaale ahaan, waxaad aadi kartaa gooyn hoose oo ka tagaysa dherer la maareyn karo oo ku yaal dusha sare ee madaxa, laakiin weli waxay muujinaysaa qaabka dabiiciga ah ee timahaaga.
Sida timaha lulsan, timaha qalloocan ma fududa in la daweeyo, inkastoo aysan na siin sifooyin la mid ah timaha toosan, waxaan dooran karnaa in aan gooyo dhinacyada, u daaya xagga sare ee timuhu si ay u balaariyaan si dabiici ah, kaas oo ku siin doona muuqaal casri ah iyo muuqaal magaalo.
Haddii aad ka welwelsan tahay in timahaagu ay jahawareeraan oo leh qaab dheer, jel yar oo timo ah waxay kaa caawin doontaa inaad xakamayso oo aad xakamayso timo kasta U dabacsan dhammayn xarrago leh.
Timo-jarida Ivy League waa qaab kale oo nin kastaa iska bixin karo. iyada oo aan wakhti badan la gelin iyo ciidan wax soo saar leh. Astaamaha gaarka ah ee goyntan waxaa ka mid ah timo gaaban oo dhinac u kala qaybsan iyo dhinacyo libdhay.
Tani timo-jarida ragga caadiga ah soo jiidasho nooc kasta oo dhacdo ah (shaqo ama qoys). Kaliya kala hadal timo-yaqaankaaga wax ku saabsan ka tagista 5-10 sentimitir xagga sare oo leh nooc ka mid ah dhinacyada iyo qaabka sida caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » 11 ka timaha ugu fiican ee ragga
Noocyada muraayadaha qorraxda ee ugu fiican ragga
Sida loo doorto dharka arooska ugu fiican ee ragga xagaaga